China EURUS III Classic Industrial Ceiling Fan Manufacture sy Factory | Kale
EURUS III Classic Industrial Ceiling Fan
Dimy Blades 4.9m 5.5m 6.1m 7.3m lehibe Industrial HVLS Ceiling Fan
Ny andian-dahatsoratra Eurus III dia karazana mpankafy rivotra be dia be mifototra amin'ny teknolojia PMSM (motera synchronous andriamby maharitra) ary ny savaivony ambony indrindra dia 7.3 metatra. Ny torque ambony indrindra dia mahatratra 300N.m, ary ny haavon'ny rivotra feno entana dia mahatratra 14800m³ / min, izay mihoatra ny 30% ny haavon'ny rivotra amin'ny vokatra mahazatra. Afaka mampiroborobo ny fikorianan'ny rivotra eny amin'ny habakabaka amin'ny fahombiazana ambony kokoa, manatratra ny tanjon'ny mpiasa mangatsiaka, ary manatsara ny fampiononana ny tontolo iainana.
Mitsitsy angovo raha oharina amin'ny mpankafy kely
Ny faritra voarakotry ny savaivony 7.3m EURUS III dia mitovy amin'ny velaran'ny fandrakofana 50 vondrona mpankafy kely 0.75m. Ohatra, ao amin'ny orinasa iray mirefy 9000 metatra toradroa, antenaina ny hahatratra ny fandrakofana feno. Ny mpankafy kely iray dia mila singa 300 eo ho eo, fa ny mpankafy mitsitsy angovo indostrialy EURUSIII dia mila singa 6 fotsiny. Araka ny fampiasana 4 taona, 8 volana isan-taona, 10 ora isan'andro, manodidina ny 10.000 ora ny asa manontolo, EURUSIII mandany 90000kW · h, kely mpankafy 1080000kW · h, angovo famonjena 990000 kW · h, angovo famonjena 92%!
Afaka mitahiry mihoatra ny 50% izany rehefa miasa miaraka amin'ny rivotra
Amin'ny lohataona sy ny fararano, matetika eo anelanelan'ny 20-34 ° C ny mari-pana. Ho an'ny toerana misy rivotra dia ho mahamenatra tokoa ny mitazona na mamono ny rivotra amin'ny toetr'andro toy izany. Aorian'ny fampiharana ny mpankafy mitsitsy angovo dia tsy mila mandrehitra ny rivotra ianao. Mankanesa any amin'ny rivotra voajanahary mahazo aina mba hampangatsiaka, ny fiantraikany mitsitsy angovo dia tena manan-danja. Rehefa alefa na ampangaina ny vata fampangatsiahana dia avo dia avo ny fanjifana angovon'ny vata fampangatsiahana. Raha mpankafy mitsitsy angovo no ampiasaina dia hafa tanteraka ny vokatra---ny mpankafy fitsitsiana angovo indostrialy sy ny mpanamory rivotra dia afaka mampifangaro tanteraka ny rivotra ao anaty trano. Afaka mampihena ny fotoana fanombohan'ny vata fampangatsiahana izany na mamono ny vata fampangatsiahana sasany, izay hamonjy hery be.
Tsio-drivotra voajanahary telo dimension
Ho tsapanao ny famatsiana rivotra amin'ny lafiny telo amin'ny lafiny rehetra, mandrakotra ny ampahany amin'ny vatana manontolo, mampitombo ny etona ambonin'ny hatsembohana, ka mamorona rafitra tsio-drivotra mitovy amin'ny natiora. Ny mpankafy haingam-pandeha mahazatra dia tena tsy mahazo aina ny mitsoka ny vatan'olombelona amin'ny hafainganam-pandeha avo. Tsy vitan’ny hoe avo loatra ny hafaingan’ny rivotra, fa manery ny hafanan’ny vatana hidina tampoka. Hitondra olana ara-pahasalamana maro izany, toy ny aretin’ny mpankafy. Ny EURUSIII dia manambatra ny fampiharana ny fotoana isan-karazany. Ny hafainganan'ny rivotra dia azo amboarina manomboka amin'ny 1m/s ka hatramin'ny 5m/s mba hanomezana izay ilain'ny fotoana tsirairay. Azonao atao ny mahazo ny hafainganam-pandehan'ny rivotra tsara indrindra tianao amin'ny fanodinkodinana fotsiny ny bokotra.
Tombontsoa azo avy amin'ny PMSM (Moteur Synchronous Magnet Permanent)
Ny EURUS III dia mampiasa ny teknolojia PMSM farany indrindra (Moteur Magnet Synchronous Motor) sy ny famolavolana torsi avo lenta ivelany ivelany. Raha ampitahaina amin'ny motera asynchronous nentim-paharazana, dia manafoana ny fanjifana angovo amin'ny fampihenana ny fitaovana. Ny torque ambony indrindra dia mahatratra 300N·m, ary ny tombony lehibe kokoa dia afaka mamoaka rivotra marin-toerana kokoa, izay mahatonga ny EURUS III feno entana feno rivotra mahatratra 14800m3 / min, mihoatra ny 30% ny vidin'ny rivotra vokatra iombonana amin'ny tsena.
Fepetra fametrahana sy masontsivana ara-teknika
Ny KALE FANS dia manana ekipa za-draharaha amin'ny injeniera elektrika, mekanika ary fanorenana izay afaka manao famakafakana ny adin-tsaina amin'ny rafitry ny trano samihafa ary manome ny vahaolana fametrahana mety indrindra; azo apetraka ho an'ny trano isan-karazany misy fepetra fametrahana. Fantatsika fa tena zava-dehibe ny fametrahana, noho izany dia misy fomba fiasa henjana sy fenitry ny fametrahana mandritra ny fandidiana. Ny fahaiza-manaonay sy ny fepetra avo lenta dia hanafoana ny fisalasalanao rehetra.
6.8Amps / 220V
3.6Amps / 220V
teo aloha: DIAMOND Energy Saving Ceiling Fan
Manaraka: AIRCOOL Commercial Ceiling Fan / Cooling Fan
Fan indostrialy goavambe
mpankafy valindrihana indostrialy
Fan elektrika indostrialy
Fan Hvls Industrial
Ventilation indostrialy sy fantson-drano mamindra
Fan Hvls Ventilation Industrial
Fan indostrialy lehibe